3। एयरपोर्ट | RayHaber
यातायात र पूर्वाधार मन्त्री काहित टुरानले घोषणा गरे कि इस्तानबुल एयरपोर्ट परियोजनाको लागत लगभग 10 अर्ब युरो हो र यो परियोजना 2028 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। CHP शिमसन डिप्टी कमल Zeybek'in यातायात प्रश्नको जवाफ [अधिक ...]
बीबीका अध्यक्ष एकरेम इमामोलुले भोज अघि आफ्नो वाचा पूरा गरे, "म इस्तानबुलको सडकमा हुनेछु"। सबैभन्दा पहिले, ğmamoğlu कबाटाş - महमुतबे मेट्रो लाइनको बेइक्टाş स्टेशनको निर्माण स्थल भ्रमण गरे। [अधिक ...]
इस्तानबुल एयरपोर्ट काताल्का रेलवे लाइन को लागी पहिलो चरण
3 मेट्रोबाट पुग्न सम्भव छैन। 26 किलोमिटर रेलमार्ग अटाल्का र अर्नावुटकी बीचको रेलमार्गबाट ​​एयरपोर्टमा यातायात प्रदान गर्ने एजेन्डामा छ। लागत2अरब 627 मिलियन 600 हजार TL को रूपमा गणना गरीयो [अधिक ...]
इस्तांबुल सबै मापदण्डहरूमा अन्तिम स्थानमा छ
इस्तानबुलमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा तथ्या .्क संकलन गरिएको थियो। नवनिर्वाचित इस्तानबुलको चुनावको लागि 10 मिलियन 560 हजार 963 इस्तानबुलको मेयर चयन गर्न फेरि चुनावमा जाँदैछ। यस लाख [अधिक ...]
3 उत्तर वन रक्षा (KOS) द्वारा। एयरपोर्ट साइटमा उपग्रह इमेजरीमा गरिएको विश्लेषण अनुसार पूर्ण 13 मिलियन रूखहरू निर्माणको कारण काटिएको थियो। परियोजनाको EIA रिपोर्टमा,2रूखहरू का आधा संख्या काटिनु पर्छ [अधिक ...]
3, जहाँ ऊ बिहान इस्टानबुल, Ayazağa मा बस स्टेशन बाट प्रस्थान गर्नेछ। Arnavutköy Habipler को दिशामा एयरपोर्ट बस खाली सर्दै गर्दा शहरमा अचानक आगलागी भयो। बसमा कोही पनि छोटो समयमै आगोको बलमा फर्केनन् [अधिक ...]
3, जुन AKP बर्षेदेखि विज्ञापन गरीरहेको छ। उडानहरू एयरपोर्टमा अवरुद्ध छन्। यी समस्याहरू छलफल गर्ने क्रममा एयरपोर्टले विदेशीहरूलाई बेच्ने दाबी आयो। सीएचपी इस्तानबुलका डिप्टी Özgür Karabat, जसले यस मुद्दालाई तुर्की महान् राष्ट्रिय सम्मेलनको एजेन्डामा ल्याए [अधिक ...]
इस्तांबुल हवाईअड्डा विरुद्ध पायलटहरू, पायलटहरू Worry
हिजो भारी मुसलधारी उडानका कारण इस्तानबुल पनि नकारात्मक असर परेको थियो। भर्खरै खोलिएको इस्तानबुल एयरपोर्टको लागि विमानहरू उडान गर्ने विमानहरूले अवतरण गर्नु अघि लामो समयको लागि हावामा यात्रा गर्नु पर्थ्यो। यो ज्ञात छ, छोटो छ [अधिक ...]
हवाई अड्डा उत्प्रेरित, कार्यकर्ताहरूको भाग्य के भयो? TAV र IGA अपेक्षित
TAV एयरपोर्ट, जुन एट्याटुक एयरपोर्ट, 3.Havalimanı'nın संचालित लगभग 4500 कामदारहरूको स्थान परिवर्तनको कारण खारेज गरिएको थियो। अर्कोतर्फ,3कम्पनीको कार्यकारी बोर्डका अध्यक्ष। [अधिक ...]
इस्तांबुल एयरपोर्टले बर्फको परीक्षा लिनुभयो?
यस वर्ष हामी फेब्रुअरीको अन्त्यमा सेतो कभरसँग भेट्नेछौं जब यो हिउँ पर्दैन। बर्फबारी पछिल्ला वर्षहरु भन्दा अधिक 'दयालु' थियो। बिस्तारै पानी पर्यो। हावाको तापक्रम अचानक बन्द भएन। वर्षा साताको अन्त्यमा आउँदैछ [अधिक ...]
3। क्या विमानस्थल को लागि एक स्थगित हुनेछ?
यसको निर्माण भएदेखि इस्तानबुल एयरपोर्ट ठूलो विवादको विषय भएको छ। अब सार्ने प्रक्रिया। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, एयरलाइनहाबर टीम पनि यसलाई बनाउन सक्षम छ [अधिक ...]
डि ह्युमन राइट्स, डेमोक्रेसी, पीस एण्ड सोलिडारिटी अवार्ड भेरिलेन, जुन एक्सएनयूएमएक्स देखि नियमित रूपमा SODEV द्वारा प्रदान गरिएको छ, लाई टक्सिम हिल होटेलमा आयोजित समारोहमा विजेताहरुलाई प्रस्तुत गरियो। एन मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, शान्ति र एकता पुरस्कार "2001। [अधिक ...]
SODEV को 2018 मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, शान्ति र एकता पुरस्कार। यो विमानस्थलमा काम गर्नेहरूलाई दिइयो। डी मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, शान्ति र एकता पुरस्कार SODEV द्वारा नियमित रूपमा यस वर्ष3बाट [अधिक ...]
इस्तांबुल एअरपोर्टको कर्मचारी कर्मचारी च्यानल सुसमाचारको इस्तांबुल
वातावरण र शहरीकरण मन्त्री मुराट कुरुम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय रूपरेखा सम्मेलन उहाँ पार्टीहरूको सम्मेलन (COP24) मा भाग लिन जानुभयो र क्यान्डोइस, पोल्याण्डमा कनाल इस्तानबुल परियोजनाको बारेमा आकलन गर्नुभयो। संस्था, "च्यानल [अधिक ...]